OnePlus wuxuu sii wadi doonaa inuu soo bandhigo laba nooc oo jiil walba ah | Androidsis
Sannadkan, OnePlus ayaa naga yaabay soo bandhigida laba nooc oo udhaxeeya heerkeeda dhamaadka dhamaadka guga. Waxyaabaha sidoo kale lagu soo celiyey deyrta moodooyinkooda cusub. Waxay u muuqataa in tani ay noqon doonto istiraatiijiyad cusub oo ah nooca Shiinaha mustaqbalka, sida uu xaqiijiyay agaasimaha guud ee shirkadda wareysi horeba. Marka jiil kasta wuxuu yeelan doonaa laba nooc.
Natiijooyinka wanaagsan ee sanadkan, oo leh laba moodal guga iyo laba dayr kale, waxay umuuqdaan kuwa qancinaya OnePlus. Marka waxaan filan karnaa in nooc kasta oo cusub uu la imaan doono laba qalab, kuwaas oo doonaya inay ku qancaan dhammaan noocyada isticmaaleyaasha suuqa.
Shirkaddu waxay ku shaqeysaa moodooyinkeeda sanadka soo socda, OnePlus 8 iyo 8 Pro, in la sii daayo rubuca labaad Sanadka dambe. Waxay kusii wadi doonaan sharad qaab aad uxun, qiimo jaban iyo qaab Pro ah, taas oo inaga tagi doonta horumar iyo hal-abuurnimo weyn. Waa xubno la hubo inay dad badani jeclaan doonaan.
Iibinta wanaagsan ee ay hayaan sanadkan iyagu waa kicinta ugu weyn ee astaanta dareenkan. Marka waxay rajeynayaan inay ku celceliyaan guushan jiilalka mustaqbalka, halkaasoo iibinta laga filayo inay ahaato mid togan. Gaar ahaan tan calaamaddu u korayso adduunka.
Istaraatiijiyaddan OnePlus ee soo saarista laba nooc ayaa u shaqeyneysa iyaga gaar ahaan suuqyada sida Hindiya. Tani waa muhiim, maxaa yeelay Hindiya durba waa suuqa labaad ee adduunka. Marka lagu daro inay tahay suuq ay sumaddu ku sii kordhayso qaybta caymiska.
Sidaa darteed, maaha wax aan caadi ahayn inay raadsadaan inay ilaashadaan istiraatiijiyaddan, haddii ay rumaysan yihiin in sidan oo kale ay wax u iibin karaan si ka fiican oo ay u xoojin karaan booskooda suuqa. Waa inaan sugnaa wali nus sano, ka badan ama ka yar, illaa ay taleefannadooda cusub yimaadaan. Xaqiiqdii bilihii aan helnay warar badan oo iyaga ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus wuxuu sii wadi doonaa inuu soo bandhigo laba nooc oo isku mar ah